Shiinaha M1000 Taxanaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida iyo Soo-saaraha | MIT
M1000 Taxanaha Qalabka Tooska ah ee Jirka
Nidaamka kantaroolka dhexe ee madaxa banaan: hal gacan ayaa kor u qaadi kara korna u qaadi kara masraxa, soo jiidi kara munaaradaha, iyo wiishka sare. Si fudud ayaa loo shaqeeyaa oo waxtar u leeyahay.
Barxadku kor iyo hoos ayuu kor iyo hoos ugu qaadi karaa korna u qaadi karaa dhererka la cayimay. Meesha ugu hooseysa, way fududahay in la rakibo ama hoos loo dhigo munaaradaha, oo uu qaban karo hal qof.
* Nidaam kontaroolid dhexe oo madaxbanaan: hal gacan qabasho ayaa kor u qaadi kara hoosna u dhigi kara madal, soo jiidi kara munaaradaha, iyo wiishka sare Si fudud ayaa loo shaqeeyaa oo waxtar u leeyahay.
* Barxadku kor iyo hoos ayuu kor iyo hoos ugu qaadi karaa korna u qaadi karaa dherer cayiman. Meesha ugu hooseysa, way fududahay in la rakibo ama hoos loo dhigo munaaradaha, oo uu qaban karo hal qof.
* Cabbir yar ayaa u baahan goob shaqo oo yar.
* Daarayaasha la saari karo waxay ka dhigayaan qalabka mid la dhaqaajin karo wakhti kasta.
Meel sare oo loogu talagalay qurxinta fudud iyo hagaajinta tooska culus ee wadista awoodda iyo dhaqdhaqaaqa ikhtiyaariga ah
Baabuur rakaab ah iyo SUV
Ballaca dusha sare oo leh wiishyo ku lifaaqan
Dhererka ugu yar
Dhererka ugu badan
Dhererka ugu badan oo leh munaarad jiidaya
Ballaaran ugu badnaan leh munaarad jiidaya
Dhererka ugu badan ee dhulka
Awoodda kor ugu qaad dhulka
Shaqada janjeerida otomaatiga ah
Madal 3.5° Jidka 12°
Dusha sare ee wax lagu qiyaaso
Tamarta koontaroolka fog
220V / 380V 3PH 110V / 220V hal waji
Hore: L Taxanaha Auto-body Iskuxirka Bench
Xiga: Qaadista Platform Duty culus
M Serires Qalabka Toosinta ee Jirka